३. बा-सना- केही युवतीहरुले क-ण्ड/मको बास-नालाई लिएर आफ्नो पा’र्टन-रसँग वि’-वा/द गर्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरुलाई क’ण्ड-मको बा-सना मनपर्दैन ।
४. फु/’ट्ने ड’र- से’/क्सको समयमा महिलाहरुलाई क-ण्ड/म फु’/ट्ने ड/’रले निकै स-ता’उने गर्छ । यसका कारण उनीहरुले चाहेजस्तो से’/क्स आ–नन्द लिन सक्दैनन् । जे सुकै भएपनि प्रत्येक जोडीले सुरक्षित यौ’/नस/म्पर्क गुर्नपर्छ । विभिन्न समस्या एवम रो’गहरुबाट सं-क्र’मण हुनुभन्दा सुरक्षित यौ/न आ-नन्द लिनु नै हाम्रा लागि फलदायी हुन्छ ।
यो पनि- बच्चा ज-न्माउन उत्तम महिना कुन हो ?
तर, मानवमात्र यस्तो प्रााणी हो जसले अन्य कुराको जस्तै यौ /न जीवनलाई प्रकृतिको निय/न्त्रणमा रहन दिएको छैन । पछिल्लो समय मानिसले सन्तान जन्माउने उत्तम समय कुन हो भन्ने बारेमा विभिन्न बहस हुन थालेका छन् । ति बहस अनुसार वैज्ञानिकहरुले सन्तान उत्पादनका लागि उपयुक्त समय कुन भनेर अनुसन्धान थालेका छन् ।
१२ वर्ष लामो समय लगाएर गरिएको अध्ययनमा धेरै दम्पत्तीले सन्तान ज-न्माउन यी दुई महिना रोजे, सकभर गर्मी महिनामा गर्भवती नबन्न वैज्ञानिकहरुको सुझाव
गर्मी मौसमा खेतीपातीमा प्रशस्त मात्रामा वि-षाधीको प्रयोग हुने र हावामार्फत त्यसको असर ग-र्भधा-रण गर्ने महिलामा पर्ने उनीहरुको तर्क छ । अध्ययन टोलीले डिसेम्बरमा ग-र्भाधारण गरी सेप्टेम्बरमा बच्चा जन्माउने अभिभावकको संख्या बढी भएको जनाएको छ । ‘र-सायनको मौसमी प्रभाव र आईभीएफ ग-र्भधारणमा भिटामिन डीको प्रभावबारे पछिल्लो समयमा चासो बढेको छ ।’ अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरु भन्छन् । अध्ययन टोलीले जुनमा ग-र्भाधारण नगर्न पनि सबै दम्पत्तीलाई सुझाब दिएको छ ।